トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ qowladda Pachinko inay maalgashi ku qalabka ku xadgudba waa ay adag tahay in la yareeyo si ay macaamiisha
ugu weyn, laakiin waxaa jira maalgelinta raasamaalka in mid ka mid ah xisaab kuwa miisaanka weyn ee qiimaha Pachinkoya ah. Tan iyo markii ay timaado baxay waa wax macquul ah in aan la yarayn karaa heshay in ay macaamiisha ah oo halkan aad u badan si ay u isticmaalaan lacagta, laakiin waa in aan loo hubiyo sida mid ka mid ah tilmaamayaasha.
dhawaan, waxaan leenahay tiro sii kordhaysa oo tii pachinko aad horyalka Talyaaniga. Imaansho waa, dabcan, ilaa qaybta wanaagsan quruxda iyo musqusha, tii pachinko aan ka yarayn in lacag ku qaataan. Waxaa kaloo jira dukaamada in ay sidoo kale ku xayiran dhismaha kale. Tusaale ahaan, dharka shaqaalaha, boodhadhka, iwm Waxaa jira kuraasta badan la hagaajin karo iyo hoos dherare. Marka laga eego dhinaca
kooxda martida pachinko, haddii ay jiraan xitaa haddii adeegga si macaamiisha ujeedada, sida sida hubinta muuqaalka macaamiisha dhaddig, waxaad yeelan kartaa maalgelinta raasamaalka ay u soo jiitaan macaamiisha ujeedada. Natiijada A ee maalgelinta, haddii kor u socdo, maxaa yeelay, waa tarjumaadda kaas oo sidoo kale kor u iibka waa, maalgelinta raasamaalka guusha weyn la odhan karaa.
Markaas, haddii iibka kor ugu baxaan, maxaa yeelay, waa tarjumaadda ku filan hoos u noqon kartaa in heshay in ay macaamiisha ah, waxay noqon doontaa xaqiiqda ah in qowladda pachinko tago nadiif ah, waxaa ka maqnaan doona in la yidhaahdo labada. Noqo in xaddi gaar ah oo maalgelinta raasamaalka, tii pachinko kubada in halkaas waxaa socda waa in celcelis ahaan, wax dhibaato ah ma in tii pachinko, taas oo yarayn kartaa faa'iidada.
Laakiin dhibaatada kiiska, halka kharashka aan aad u badan in maalgelinta raasamaalka, waa qowladda pachinko in hawlgalka waxaa sidoo kale aan la kordhiyo iibka ma kordhin ah. In the case of sida qowladda pachinko a, lacagta u dhiganta maalgashiga caasimada, waxay noqon doontaa soo kabashada dheeraad ah loo baahan yahay ama Waa. Tan iyo soo kabashada kharashka waa turjumaad adag, in xaaladda noocan oo kale ah, waxaan leenahay ma jirto sabab in awoodo yareynta Nante macaamiisha.
sidoo kale waa qurux a, sida muuqaalka, tii pachinko iyo dareemaan unevenness ee ba'an ee ka heshay, haddii hawlgalka waa qowladda pachinko in aan xasillooneyn ah, fadlan ka eeg maskaxda ku haysaa in ay jiraan sidoo kale waa wax macquul ah ee hoos u adag tahay. Intaa waxaa dheer, dhismaha sidoo kale duugoobin, xataa in decoration wasakh-dukaan oo musqusha, waxaa jira dad badan beryihii hore ee qowladda pachinko. In the case of ilaa qowladda pachinko ah iyo sidoo kale kuwa loo baahan yahay in yar oo geesinimo ah galaan, aad u muuqdaan qowladda pachinko oo ka mid ah xaalado badan la aasaasay muddo dheer ku. Iyagoon maciinsan wax muuqaalka
, iwm, pachinko dukaan ciyaarta in meelmarin ah, waxaa dhici karta in maalgelinta raasamaalka yar. Ka badan tii pachinko nadiif ah, ama heshay ayaa sidoo kale waa wanaagsan yahay, waxaan u malaynayaa in inta badan si fiican u soo jeesan. dukaamada Pachinko sida aan lacag ugu bixisaan sidoo kale in maalgelinta raasamaalka, waxaa laga yaabaa in sidoo kale la adkeeyay heshay oo aan wax sixitaanka ciddiyaha.
In gaaban, sida badan waxaa jira ee meelmarin ah, sida badan sixitaanka dhidib waa wanaagsan yahay, oo aad eegto howlgalka xaaladda, saddexdan, Ma malayn kartaa dhimayo waa suurto gal ah haddii xaaladda dhigma maalgashiga caasimada . Oo sidaas quruxda badan waa iyo dirtiness of muuqaalka, iyadoo aan la soo baxay waa xaqiiqda ah in sidaa darteed waxaa jirta xiriir lahayn.
rabto maalgelinta raasamaalka si ay u arkaan inta badan waa qayb ka mid ah in ama aan hagaajin kuwa jabay. IWM jaban musqusha Toka jabtay qaboojiyaha, ma muuqdaan in ay awood si uu u xaliyo qayb ka mid ah dareemi aad, ma jiro sabab ah in awoodo yareynta Nante. Sida hadhaagii jabay meeshaas inta badan waa qowladda pachinko ah, waxaan u maleynayaa in uu jiro heshay lahayn.
Waxaan qabaa in haddii ay macquul tahay in sheekada waa dabcan tixraac, laakiin ugu kalsoonaan karo waxaa laga yaabaa in wax la eegto xogta ay ujeeddo aan la siri by sida decoration dukaanka. dhismaha ayaa sidoo kale tattered, sidoo kale loo yaqaan decoration wasakh-dukaan oo musqusha, waxaa jira dad badan beryihii hore ee qowladda pachinko. In the case of ilaa qowladda pachinko ah iyo sidoo kale kuwa loo baahan yahay in yar oo geesinimo ah galaan, aad u muuqdaan qowladda pachinko oo ka mid ah xaalado badan la aasaasay muddo dheer ku. Iyagoon maciinsan wax muuqaalka
Waxaan qabaa in haddii ay macquul tahay in sheekada waa dabcan tixraac, laakiin ugu kalsoonaan karo waxaa laga yaabaa in wax la eegto xogta ay ujeeddo aan la siri by sida decoration dukaanka. Re kaliya hal qabsiga dhidib waa wanaagsan yahay, oo aad eegto howlgalka xaaladda, saddexda this, Ma malayn kartaa in la yareeyo haddii xaaladda dhigma maalgelinta raasamaalka la sameeyo. Oo sidaas quruxda badan waa iyo dirtiness of muuqaalka, iyadoo aan la soo baxay waa xaqiiqda ah in sidaa darteed waxaa jirta xiriir lahayn.
Waxaan qabaa in haddii ay macquul tahay in sheekada waa dabcan tixraac, laakiin ugu kalsoonaan karo waxaa laga yaabaa in wax la eegto xogta ay ujeeddo aan la siri by sida decoration dukaanka.